यसकारण चिसियो रक्षा मन्त्रालय र सेनाको सम्बन्ध (भिडियोसहित) -योहोखबर
यसकारण चिसियो रक्षा मन्त्रालय र सेनाको सम्बन्ध (भिडियोसहित)
काठमाडौँ - देशको सम्मानित संस्थाको रुपमा परिचित नेपाली सेनाको कामकारवाही माथि समेत राजनीतिकीकरण हुन थालेपछि रक्षामन्त्रालय र जंगी अड्डाबीचको सम्बन्धमा चिसोपना देखिएको टिप्पणी हुनथालेको छ । सेनालाई अनावश्यक जिम्मेवारी दिएर कामकारबाहीको विषयमा सरकारको असन्तुष्टि चुलिएपछि दुईसंस्थाबीचको सम्बन्ध चिसिएको हो ।
पछिल्लो समय सरकारले नेपाली सेनालाई अनावश्यक जिम्मेवारी दिएर विवादमा तानेको चर्चा चलिरहँदा रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डाबीचको सम्बन्ध पनि चिसिन थालेको छ । रक्षामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनाको कामकारवाही चित्तबुझ्दो र समय सान्र्दभिक नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसैकारण पनि दुईपक्षबीच मतभेद बढेको हो ।
शान्ति र सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएका सेनालाई सरकारले सडक निर्माणको जिम्मा दिँदै आएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सेनाले औषधी खरिददेखि सडकमा उभिने जिम्मा समेत पाएको छ । देशको संवेदनशील संस्थालाई झिनामसिना काम दिएर विवादमा मुछेको आरोप पनि चुलिएको छ । दुईपक्षीय विवादका कारण सम्बन्धमा चिसिएको सन्र्दभमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले जिम्मेवारीप्रति गर्व महशुस गर्नुको सट्टा लज्जाबोध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सेनालाई निष्कपक्ष रूपमा काम गर्न दिनुको साटो हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिक चलखेलको मैदान बनाउन खोजिएको प्रधानसेनापति थापाको गुनासो छ । यसै सन्र्दभमा पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान सरकारको कार्यशैलीप्रति यसरी असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।
राज्यका निष्पक्ष र मर्यादित संस्थाहरुमा बढ्दो राजनीतिकरणका कारण भ्रष्टाचार मात्रै होइन जनविश्वास समेत घट्दै गएको छ । यति संवेदनशील विषयमा पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
४२ दिन अघि २०७७ श्रावण २३ ०९:२४ मा प्रकाशित
के नेकपामा मन्त्री बन्न योग्य नेता नभएकै हुन् ? किन भेटेनन् ओलीले ?
संविधान कार्यान्वयनमा छैन नेताको ध्यान, एकअर्काको खोइरो खन्नमै व्यस्त
ठेकेदारको बदमासीका कारण रसायनिक मल आयातमा समस्या : मन्त्री भुसाल
जसपाले यसपटको संविधान दिवस विरोध रूपमा मनाउँदै
कैलालीमा एक महिला पत्रकार मृत अवस्थामा फेला
पछिल्लो २४ घण्टामा थप सात जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ३९० पुग्यो
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथी पुनः यौन दुर्व्यवहारको आरोप